Hooyo soomaaliyeed oo dhalinyarro ah oo ninkeedii ku dilay Bristol ee dalka Ingiriiska | Somaliska
Illaahey ha u naxariisto Aasiya Cumar oo ah hooyo soomaaliyeed oo ah dhalinyara ah ayaa maalintii isniinti waxaa mindi ku dilay seeygeedii ay u dhixi jirtay. Dilkan ayaa ka dhacay magaaladda Bristol ee dalka Ingiriiska, falkan ayaa yimif kadib markii la sheegay in marxuumadda is qabteen gabar la dhalatay wiilka.
Dhinaca kale gabar lugu magacaabo Ayaan Cabdullahi Macalin oo ah gabar qaraabo iyo saaxiib dhow la ah marxuumadda ayaa iyadoo u wareemeysay laanta afka soomaaliga ee idaacadda VOA-da, sheegtay in Aden Dahir oo ah wiilka xaaskiisa dilay mudooyinkii ugu dambeeyey laga dareemeyey xaalad isla hadal ah (stress) sababay in laga ceshto leeysinka darawalnimada dalkaasi. Ayaan Cabdulaahi ma sheegin qilaaf kale oo horey u jiray balse waxaa ay xustay in guri kasta khilaaf ka dhici karo.
Dhacdooyinka noocaan ah ayaa ku soo badanaya dalalka Galbeedka kuwaas oo ragga soomaalida yimid ay dileen xaasaskooda. Dalka Noorweey waxaa uu ka mis yahay dal ay falal noocaas ah oo badan ay horey uga dhaceen. In baan dhacdooyinka noocan ayaa loo aaneeya caafimaad darro xagga maskaxda iyo isku dhac labo dhaqan oo sababa iyo qooysass badan dumiyey.